ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5ကိုသတိရပါတဲ့ Wingwoman အဘို့အရာမြား
5 ကိုသတိရပါတဲ့ Wingwoman အဘို့အရာမြား
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇူလိုင်. 12 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
အ wingwoman ဖြစ်ခြင်းအရေးပါသောအလုပ်ဖြစ်ပါသည်! သင်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းအပေါင်းတို့နှင့်တယောက်သွားလာရင်းအတွက်အပိုငျးပိုငျးဖွင့်ကောက်နေဖြစ်ကြောင်းသေချာရန်ရှိသည်. သို့သော်မိတ်ဆွေတစ်ဦးအဘို့ဖြစ်၏ဘာနှင့်ဖိနပ်သည်အခြားခြေလျင်အခါလျှင်မျှော်လင့်သူတို့အတူတူပင်ပြုပါလိမ့်မယ်. ငါအတူတူအကြံပေးချက်များထားပါဘူးဒါပေမဲ့ငါရကျိုးနပ်မည်သည့် wingwoman သူမ၏ဆားပို zillion ရှိပါတယ်သိတယ်ထင်. တစ်လမ်းအတွက်ငါဆို wingwoman ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအလုပ်အပေါ်လေ့လာသင်ယူကြသည်ကိုသိထင် – နှင့်ပင်ပေးဆောင်ခဲ့မ!
သင်၏အဆွေခင်ပွန်းလမ်းတစ်လျှောက်အချို့သောကြောက်မက်ဘွယ်သောလူတွေ့ဆုံရန်သွား. ကံမကောင်းစွာသောဘဝရဲ့. သင်သည်ထိုအကြောင်းကိုဘာမှမပွုနိုငျစဉ်သင်တို့မူကား, ဘင်ပွင့်လင်း crack ဖို့ရှိရန်လိုအပ်မည် & ဂျယ်ရီရဲ့ပြီးနောက်ပဲထိုသူတို့အဘို့ထိုအရပ်၌ဖြစ်. သူတို့ဘာမှမမှားကိုပြုသူတို့သည်အနာဂတ်၌သူတို့ကို သာ. ကောင်း၏သင့်လျော်သူတစ်ဦးဦးနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပါလိမ့်မယ်ကြောင်းကိုသိရကြောင်းသေချာပါ. သူတို့ကချိုး-up ကအတွက်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအရာတို့ကိုအများကြီးပြောဆိုကြပြီဆိုပါကသိသာထင်ရှားတဲ့သင်ဖြစ်နိုင်အသေးစိတ်တွင်ဤအချို့ကိုဖြတ်သန်းသွားရန်ရှိသည်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်ရိုးရိုး listen. သူတို့စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ကြရတယ်သောကြောင့်သူတို့စနစ်၏ထွက်ရရန်လိုအပ်မည်. အိုးနှင့်ကျိန်းသေဟောင်းအကြောင်းကိုအနုတ်ဖြစ်!
သူတို့ကကို Safe ဖြစ်ကြသည်ရှိစေရန်
တစ်ခါတုန်းကမီညနည်းနည်း creepy ခဲ့တဲ့ကောင်လေးနှင့်အတူအိမ်သို့သွားအကြောင်းပြောနေတာတယောက်မိန်းကလေးပြောနေတာနဲ့ကြားနာမိတ်ဆွေများအုပ်စုတစ်ခုကြားနာသတိရ. ကျေးဇူးတင်စရာသူမပွင်ခဲ့ပေမယ့်သူမနက်ဖြန်နေ့၌မိမိအိမျထဲကရဖို့နည်းနည်းရုန်းကန်. သူတို့သူမ၏မိတ်ဆွေများဖြစ်ထင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတစ်ဦး bit နဲ့ creepy ခဲ့လျှင်ငါ့အလက်ငင်းတုံ့ပြန်မှုအဘယ်ကြောင့်သူတို့ထဲကတယောက်သူမ၏နှင့်အတူမသွားဘဲခဲ့သည်? ငါသည်သင်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပါကယောက်ျားတစ်ယောက်၏အိမျသို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစေခက်ပါတယ်ကြောင့်နည်းနည်းခက်ခဲစေခြင်းငှါဆိုပါစို့ဒါပေမယ့်ငါငါ့အိမ်ထောင်ဖက်တစ်ဦးပုတ်နှင့်အတူအိမ်သို့သွားခဲ့သည်ထင်လျှင်ငါသူတို့ထင်လျှင်ပင်ငါ၏အအခက်ခဲဆုံးကြိုးစားကြည့်ပါချင်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရထင် ငါရမှအရူးကြီးနှင့်ဆိုဖာပေါ်အိပ်! ငါသူတို့ပွင်ဖြစ်လျှင်ကြည့်ဖို့သူတို့ကိုရန်ဖုန်းပေါ်မှာဖြစ်သေချာအောင်င့်ကပျက်ကွက်ခုနှစ်တွင်. သိသာထင်ရှားတဲ့ကိုကွောကျရှံ့သင် Over-အကာအကွယ်ဖြတ်ပြီးလာလိမ့်မယ်ထင်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ငါရေရှည်မှာမိတ်ဆွေတစ်ဦးသင်သည်သူတို့၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကြောင့်လုပ်နေကြသိရကြလိမ့်မည်ထင်. ထိုသို့ကိုယ်အဆွေခင်ပွန်းနှင့်ဝမ်းနည်းစွာအဘယျသို့ထို့ကြောင့်မကြာခဏမဖွစျသှားနိုငျသောအရာကို၏အခြားရွေးချယ်စရာထက်ဝေးပိုကောင်းင်.
ရပ်-အားဖြင့်တွင် Essentials ရှိခြင်း
ဒါကလေးလံသော bit နဲ့ယခင်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ပြုသောအမှုဖွင်. အခုဆိုရင်ပျော်စရာပစ္စည်းပစ္စယပေါ်သို့! မဆို wingwoman သင်လုပ်-up ကသင့်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလိုအပ်ပါလိမ့်မည်သိတယ်, ဆံပင်စုတ်တံ, ဘီး, စသည်တို့ကို … ရပ်တည်ချက်ဖြင့်ပေါ်. သင်တို့တွင်အတစ်ခုခုကိုသင်အခြားတစ်ဦးနောက်ကောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အထူးတစ်စုံတစ်ဦးကိုအထင်ကြီးနိုင်ရန်အတွက်မေ့လျော့ကြပြီစေခြင်းငှါ, အချက်တွေကိုအချင်းချင်းနှစ်ဦးစလုံးဝေစုတတ်နိုင်သမျှသင်ကြိုက်နှစ်သက်သူတစ်ဦးဦးကိုမြင်လျှင်ကြောင်းလမ်း.
ငါသည်သင်တို့ကိုအော်စကာကိုခံထိုက်သောသူဒါမှမဟုတ်တူ၏ဘာမှရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး. ငါခလုတ်များအတွက်ပြုမူလို့မရပါဘူးသင်မူကား, အထူးသဖြင့်မင့်လာသောအခါအချိန်ကျော်သငျသညျသငျသညျစိတ်ဝင်စားနေထွက်လုပျဆောငျဖို့သင်ယူပါလိမ့်မည်. လူအကြောင်းအရာသူတို့တစ်စုံတစ်ယောက်ကကြိုက်နှစ်သက်သည့်အခါ (ငါတို့ရှိသမျှသည်ရှိရှိနေသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူအားမျှမည်သူမဆို diss နိုင်!) သူတို့အရမ်းသူတို့ကိုအကြောင်းပြောဆိုကြောင်း. တဖန်သင်တို့ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ဆိုသရာရာ၌ဆိုးဆိုးရွားရွားစိတ်ဝင်စားဖြစ်သွားကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်သင်ရုံပြုံးပြပြီးတူစကားနှင့်ဖောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ် “အမှန်?”, “အိုးမိုက်တယ်။”, “အင်း, ဒါရင်ခုန်စရာ” သငျတို့သညျကောငျးသောဖြစ်သင့်. သူတို့ကမပုဂ္ဂိုလ်ပင်အသိပေးစာအကြောင်းပြောနေတာအတွက်ဒါစိတ်ဝင်စား.
Talk ကိုရန်ရရှိနိုင် Be
သငျသညျအလုပျလုပျသို့မဟုတ်သမျှကွဲပြားခြားနားတဲ့င်သောအချိန်တွင်နေတယ်ဆိုရင်. သို့သော်ထိုသို့သင်လုပ်နေလုပ်နေကြောင်းအရာတစ်ခုခုရဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့အကြောင်းအရာကိုသင်တို့ထံသို့ပြောဆိုရန်လိုအပ်ကြောင်းအဓိကပြဿနာရှိခြင်းလျှင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့မိတျဆှေကိုတင်အမြဲစောင့်နိုင်. သူတို့အဆက်မပြတ်ကြောင့်လုပ်နေကြခြင်းနှင့်သင်သည်တစုံတခုကိုပြုရမရနိုငျဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြန်လာ၌သင်တို့အဘို့ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလိုလျှင်သင်အားပြန်လည်စဉ်းစားရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်သင်မူကားကောင်းတစ်ဦးခင်မင်ရင်းနှီးရှိပါကထိုသူတို့အဘို့ထိုအရပ်၌ဖြစ်, သူတို့အဘို့အထွက်ကြည့်ရှုနှင့်သင်တကယ်ကောင်းတစ်ဦး wingwoman သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးအဖြစ်ထက်မဆိုပိုပြီးမပွုနိုငျ.
စားနပ်ရိက္ခာတိုင်းကျောင်းသားဆက်ဆံရေးသည် သာ. ကောင်း၏ Make တတ်နိုင်သ?
မေးခွန်းငါးခုအွန်လိုင်း Daters ကြားနာစစ်ဆေးမှုငြီးငွေ့များမှာ
ရှောင်ကြဉ်ပါရန်ငါးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ Profile ကိုအမှား